Cristiano Ronaldo Oo Lionel Messi Kaga Guulaystay Ballon d’Or 2017 Markii 5-aad | Allsomaliland
Cristiano Ronaldo Oo Lionel Messi Kaga Guulaystay Ballon d’Or 2017 Markii 5-aad
Ciyaar yahanka caanka ah ee Cristiano Ronaldo ayaa markii shanaad ku guulaystay billadda ciddiga adduunka ugu fiican. Xiddiga reer Bortuqaal ee kooxda Real Madrid ayaa sannadkii labaad oo isku xiga abaalmarintan kaga guulaystay xiddiga Barcelona ee Messi oo ay si weyn u xafiiltamaan. Waxa kaalinta saddexaad noqday xiddiga PSG ee Neymar.
Ronaldo ayaa sanadkii la soo dhaafay kooxdiisa Real Madrid ka caawiyay in ay ku guulaysato Champions League iyo in ay hanato Laliga markii u horaysay ilaa 2012-kii “Tani waa wax aan sanad walba sugayay. Waxaan u mahadcelinaya ciyaar yahannada kooxdayda Real Madrid. Waxa kale oo aan doonaya in aan u mahadceliyo dadka kale ee gacan ka gaystay in aan halkan gaadho,” Sidaas ayuu yidhi Ronaldo.
Ronaldo ayaa sannadkii labaad oo xidhiidh ah qaaday Xidignimada Adduunka waxaanu barbareeyay diwaanka Messi oo shan jeer oo hore qaaday. Abaalmarintan waxa go’aamiya 173 Wariye oo u codeeyay xiddiga cidda ay siin lahaayeen kuwaas oo doortay Cristiano Ronaldo.